မေလ ၉ ရက်အတွက်စနေ၊ - Oscရာဝတီ
မေလ ၉ ရက်အတွက်စနေ၊
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - မေ ၉ ရက်မွေးနေ့ Horoscope
မေလ9ရက်ရာသီဥတု
အပေါ်မွေးဖွားတဲ့ Taurus ဖြစ်ခြင်းမေလ ၉ ရက်ခင်ဗျားရဲ့နည်းဗျူဟာ၊ သင်၌မှန်ကန်သောအချိန်ကာလကိုမှန်ကန်စွာပြောနိုင်သည့်ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ကြိမ်ဖန်များစွာသင်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သူတစ်ပါး၏ခံစားချက်များကိုကာကွယ်ရန်ဤစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
TO သို့ကသစ္စာရှိမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ကတိကဝတ်များနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းတို့အတွက်ရှင်သန်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်နေရောင်နိမိတ်အနည်းငယ်နှင့်သာအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်။ အများဆုံးသောရာသီဥတုလက္ခဏာအချို့Taurus နှင့်သဟဇာတPisces, Cancer, Virgo နှင့် Capricorn တို့ဖြစ်သည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်များသည်နွားနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းစွာနှိပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအောက်တွင်ရှာဖွေပါ။၉ ။ 2019 ။
STIERMANN - ဘယ်သူနဲ့သင့်တော်မလဲ။ Venus ဂြိုဟ်က Taurus ကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုအချစ်နတ်ဘုရားမအနေဖြင့်အမည်ပေးထားသည်။ ဒါပေမယ့်ရင်ခုန်စရာ Taurus ဆက်ဆံရေးနှင့်သူ၏အသက်တာ၌ကဲ့သို့အဘယ်သို့ရှိသနည်း ထိုဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်၏အမျိုးအစားများအတွက် Taurus များအတွက်သဟဇာတသင်္ကေတများကဘာတွေလဲ။ မည်သည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များသည် Taurus နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ကိုသင်စဉ်းစားပါကသင်၏သိချင်စိတ်ကိုကျေနပ်နိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် Taurus နှင့်အခြားရာသီဥတုလက္ခဏာများနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့၏ရိုးသားခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။ Lifesolver မှကြိုဆိုပါသည် urus 'Taurus လူနှင့်သင်အဆင်ပြေသည်ဟုမည်သူထင်သနည်း။ Taurus အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလက္ခဏာများကိုပိုမိုနားလည်ရန် Taurus ၏အနည်းငယ်သောအသိပညာသည်မရှိမဖြစ်ဖြစ်သည်။ Taurus လူတွေဟာwhoseပြီလ ၂၀ ရက်မှမေလ ၂၀ ရက်အကြားမွေးဖွားတဲ့နေ့။
၎င်းသည်ကမ္ဘာမြေ၏အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး Taurus သည်သူတို့၏စစ်မှန်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ လက်တွေ့ကျမှုနှင့်မိသားစုတန်ဖိုးများအတွက်လူသိများသည်။ Taurus သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာသည်ချစ်ရသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုခံနိုင်ရန်လုံလောက်သည်။
သူတို့သည်မိသားစု မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပြinနာကိုမဆိုကူညီလိုကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Taurus အမျိုးသားများသည်အလုပ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်လာပြီးအချို့သောအရာဝတ္ထုများကိုဘဝ၏ရှုထောင့်များနှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိသောသူများဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကို Taurus များအတွက်စံပြမိတ်ဖက်စေသည်? ယခုသင်သည် Taurus ၏အဓိကလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိလာပြီဖြစ်သောကြောင့် Taurus နှင့်မည်သည့်စရိုက်လက္ခဏာများသည်သင့်လျော်သည်ကိုသိရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
Taurus ၏အဖော်၌တွေ့ရသောစရိုက်အချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြထားသည်။ စရိုက်လက္ခဏာ ၁ - မိသားစုမှကတိကဝတ် Taurusmen များသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ သင့်မိသားစုကိုပျော်ရွှင်အောင်သင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိသားစုအတွက်ခိုင်မာသောအခြေခံကိုဖန်တီးရန်၎င်းတို့နှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်သည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေကြသည်။
Taurus ယောက်ျားတို့သည်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ငြီးငွေ့ဘယ်တော့မှမ။ လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သည် Taurus ၏နှလုံးသားကိုအများဆုံးရရှိလိမ့်မည်။ လက္ခဏာ ၂ - အာရုံစိုက်နားထောင်သူ Taurus သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးလှပသောအရာများအကြောင်းသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားပြောပြလိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Taurus ၏မိတ်ဖက်သည်ကောင်းသော၊ စေ့စေ့နားထောင်သူဖြစ်ရန်လိုသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကြာရှည်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းရှိသူတစ် ဦး က Taurus အမျိုးသားများအားချစ်မြတ်နိုးမှုကိုခံစားရစေသည်။ သူတို့ကစိတ် ၀ င်စားပြီးနားထောင်ပေးမည့်မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေသည်။
အသွင်အပြင် ၃ - ရိုးရာအစဉ်အလာအရ Taurus သူတို့သည်လူနေမှုဘ ၀ နှင့်သက်ဆိုင်သောအခါတွင်ရှေးရိုးအစဉ်အလာနှင့်အစဉ်အလာအရသာဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာရိုးရာပုံစံနဲ့နေထိုင်ချင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့စိတ် ၀ င်စားသူတွေနဲ့အတူလှည့်လည်ချင်ကြတယ်။
ဒီတော့ Taurus ယောက်ျားကြိုတင်ခန့်မှန်းမိတ်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်။ Taurus အတွက်မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင်ရိုးရာအစဉ်အလာအရအရေးပါသည်။ လက္ခဏာ (၄): မပြောင်းလဲနိုင်သောကိုယ်ကျင့်တရား Taurus သည်ပြောင်းလဲရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သောကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောမြေကြီးပေါ်ရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
သူတို့တည်ဆောက်ထားသည့်အိမ်နှင့်နေထိုင်ရန်ကတိသစ္စာပြုထားသည့်အဖော်တစ် ဦး ကိုလိုချင်ကြသည်။ Taurus ယောက်ျားအမြဲမယိမ်းယိုင်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အတူမိတ်ဖက်ရှာကြသည်။ ဝိသေသလက္ခဏာ ၅ - ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှု / လုံခြုံရေး Taurus အမျိုးသားများသည်ငွေရေးကြေးရေးတည်ငြိမ်ပြီးလွတ်လပ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။
Taurus သည်သူတို့အပေါ်မှီခိုစရာမလိုဘဲသူတို့၏ဘဏ္ancesာငွေအားလုံးကိုစီမံနိုင်သည့်အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Taurus အမျိုးသားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာမင်းကိုအမြဲတမ်းအားထားနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာစေချင်တယ်။ မည်သည့်ဆိုင်းဘုတ်များ Taurus ယောက်ျားနှင့်သဟဇာတဖြစ်သနည်း နက္ခတ်ဗေဒင်အရ၊ Taurus အမျိုးသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောစရိုက်များ၏အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ အခြားသောရာသီဥတုလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများရှိသည်။ Taurus မြင့်မားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်ကင်ဆာ၊ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ လှပသောအတွေ့အကြုံများနှင့်အရာများကိုချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်ကင်ဆာရောဂါသည်ခိုင်မြဲသောဆက်ဆံရေးအတွက်အလားအလာရှိသည်။
သင်သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ချနိုင်သည်။ Taurus ၏ခက်ခဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူအထိခိုက်မခံကင်ဆာ၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါစုံလင်သောနှစ်လုံးကိုစေသည်။ နာကျင်မှုခံစားချက်များကြောင့်ကင်ဆာရောဂါသည်လျစ်လျူရှုသည့်အခါ Taurus အမျိုးသားများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို၎င်းတို့အားလိုအပ်သည်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရစေရန်ထိုနေရာတွင်ရှိနေသည်။
Taurus နှင့် Taurus Taurus နှင့် Taurus အကြားဆက်သွယ်မှုအကြောင်းပြောကြရအောင်။ သူတို့ဟာဒီ Taurus ယောက်ျား၌ရှိသကဲ့သို့သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်သူ့ကိုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရသကဲ့သို့စုံလင်သောပွဲစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်တူညီသောစရိုက်လက္ခဏာများနှင့်ရိုးရာတန်ဖိုးများကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်ကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တည်မြဲသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။
သူတို့မိသားစုများကိုအတူတကွကျွေးမွေးခြင်းဖြင့်သူတို့ဘ ၀ များကိုမျှဝေရန်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ Taurus and Virgo Taurus အမျိုးသားများနှင့်အပျိုကညာအမျိုးသမီးများသည်ဖြည့်စွက်စရိုက်များများစွာရှိသည်။ Virgo သည်သိမှုစွမ်းအားကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသော Taurus သည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာအသွင်ဆောင်သဖြင့်ဤနိမိတ်နှစ်ခုသည်မြင့်မားသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်အတူတကွလာသည်။
ဤဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည်။ Virgo သည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုငြင်းပယ်သောအခါ Taurus သည်အမြဲတမ်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ သူတို့ပျင်းစရာဘယ်တော့မှအဖြစ်ဒီတွဲဖက်မှုတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Scorpio နှင့် Taurus Scorpio နှင့် Taurus ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော်လည်း, သူတို့သည်ဆန့်ကျင်ဆွဲဆောင်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာဖြစ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့၏ကွဲပြားမှုများသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ ဤအရာကိုနားလည်ရန်ဥပမာတစ်ခုကိုအသုံးပြုကြပါစို့။ အထိခိုက်မခံသော Scorpio အမျိုးသမီးသည်လက်တွေ့ကျပြီးမြေသား Taurus အမျိုးသားများအတွက်လမ်းညွှန်မှုကိုရှာလိမ့်မည်။
Scorpio အမျိုးသမီးများသည်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကြောင့်တစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး မတူကွဲပြားမှုကိုလေးစားပြီးခိုင်မာတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဖွဲ့ကြပါတယ်။ ဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးကိုမျှဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Capricorn နှင့် Taurus Taurus နှင့် Capricorn တို့သည်အတူတကွသွားကြပြီးနက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ကြသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြည့်စွက်ထားသည် ပြင်ပကမ္ဘာမှာတော့ဒီစုံတွဲဟာပျင်းစရာကောင်းတယ်။
ဒါပေမယ့်အိပ်ရာထဲမှာသူတို့ဟာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး အရမ်းကိုသဟဇာတဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာကမ္ဘာနဲ့မဝှေ့ယမ်းဘဲနေနေကြတယ်။ Taurus သည်သူတို့၏ Capricorn လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအမြဲလှုံ့ဆော်ပေးပြီးအတူတကွအလုပ်လုပ်ကာပျော်စရာကောင်းသောဘဝကိုမျှဝေသည်။ သူတို့ရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုကြောင့်သူတို့ဟာမခိုင်မြဲတဲ့နှောင်ကြိုးကိုမျှဝေခံစားကြရတယ်။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အဆက်အသွယ်ရှိကြသည်။ အလယ်အလတ်လိုက်ဖက်မှုအဆင့်အရ Taurus အားအလယ်အလတ်စွမ်းရည်ရှိသောသင်္ကေတများဖြစ်သော Gemini, Libra, Pisces နှင့် Leo တို့ကိုစာရင်းထဲတွင်တွေ့ရသည်။ Gemini, Leo နှင့် Pisces တို့သည် Taurus အမျိုးသားများနှင့်အဆင်ပြေသော်လည်းအချို့ဒေသများတွင်သူတို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကြည့်ကြရအောင် Gemini နှင့် Taurus Gemini နှင့် Taurus ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှု၌သူတို့၏မီးပွားကြောင့်လူသိများသည်၊ သို့သော်သူတို့၏တန်ဖိုးများနှင့်စိတ်ခံစားမှုများအကြောင်းကိုပြောသောအခါထိုမီးပွားအနည်းငယ်လျော့နည်းသွားသည်။ Gemini ကိုတစ်ခါတစ်ရံ Taurus ကမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဟာကသူတို့တိုက်ပွဲအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုကကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အမှားတွေလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်။
အချင်းချင်းရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှလုံးသားကိုရဖို့အတွက်သင်ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်။ သူတို့၏အငြင်းပွားမှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဤနှစ်ခုသည် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ Leo နှင့် Taurus Leo နှလုံးသားခြင်္သေ့များသည်လှပသော Taurus ယောက်ျားများကိုသူတို့၏လှပသောနည်းဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံလီယို၏စိတ်ခံစားမှုများသည် Taurus ၏အတွင်းပိုင်းသဟဇာတမှုကိုပျက်ပြားစေသည်။ သူတို့ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကိုအသည်းအသန်ခံစားနေရတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေဖြစ်ပြီးလီယိုနဲ့ Taurus တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအတူတကွထားရန်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုရရန်တူညီသောတိုက်တွန်းချက်ရှိသည်။
ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောအလိုဆန္ဒများရှိခြင်းကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိုအပ်ချက်များကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကထိုဆက်ဆံရေးသည်အဆိုးဆုံးပုံသဏ္inာန်ရှိနိုင်သည်။ Pisces and Taurus Pisces ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတိမ်အနက်သည် Taurus အားသူတို့၏လျှို့ဝှက်ထားသောစိတ်ခံစားမှုများကိုရှာဖွေရန်နှင့်အပြည့်အဝဖွင့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
နှစ် ဦး စလုံးသည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ တခါတရံတွင် Pisces ၏လွှမ်းမိုးသောခံစားချက်များသည် Taurus အမျိုးသားများအတွက်တစ်ခုခုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှပုန်းလျှိုးနေသည်ကိုသိစေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်စင်ကြယ်သော်လည်း၊ Taurus သည်၎င်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်ထိုးနှက်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤပွဲတွင်အလုပ်လုပ်ရန် Taurus အမျိုးသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ ၀ င်ရမည်။ Taurus အဘို့ဤဆွေးနွေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ Taurus သည်အခြားနေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် Taurus အတွက်ဆွေးနွေးမှု၏အဓိပ္ပါယ်ကို ထပ်မံ၍ စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
သဟဇာတဖြစ်သော Taurus နိမိတ်လက္ခဏာများကိုချဉ်းကပ်ရန်သင်စဉ်းစားသောအခါ၊ ဤစည်းမျဉ်း (၃) ခုကိုလိုက်နာခြင်းကပိုကောင်းသည်။ # ၁ - အချက်အလက်များတွင်အလွန်အမင်းပါ ၀ င်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်၏လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောစရိုက်များသည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုလုံးကိုမသတ်မှတ်ပါ။ ဤရွေ့ကား Taurus အမျိုးသားများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသူများဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင်သည်သူတို့ကိုခံစားရနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင်မခံစားရနိုင်ပါ။ နံပါတ် ၂– အမြဲတမ်းသင်၏နှလုံးသားကိုဂရုစိုက်ပါတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသိခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းသည်မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ရသော horoscopes များထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
ဤအရာသည်ခန့်မှန်းချက်များသာ ဖြစ်၍ ပြီးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကသင့်ကိုမရပ်တန့်စေပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများသည်ဤရာသီဥတုလက္ခဏာများထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ ဤခန့်မှန်းချက်များကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ နံပါတ် (၃) သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန်ကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာများကိုကိုယ်စားပြုသောဒီလိုက်ဖက်တဲ့ဟောကိန်းများသည်ဥပဒေအရမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်သင်လိုအပ်သောအချက်များကိုဖော်ပြရန်ကူညီလိမ့်မည်။
၎င်းသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ဘ ၀ တွင်မည်သည့်နေရာတွင်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာရှိသည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်ဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းမျိုးပေးပါ။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများကိုထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်သင်မည်သည့်ဆောင်းပါးမျိုးကိုကြိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးများအတွက်ရုပ်သံလိုင်းကိုစာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။
အများဆုံးသဟဇာတဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူကယေဘုယျအားဖြင့် Cancer, Virgo, Capricorn နှင့် Pisces ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသဟဇာတဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူကယေဘုယျအားဖြင့်လီယိုနှင့်ရေကူးသမားများဖြစ်သည်။ နေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဆိုင်းဘုတ်များလိုက်ဖက်တဲ့၏ကောင်းတစ် ဦး ယေဘုယျစိတ်ကူးပေးနိုင်သည်။
သင်က Taurus ဖြစ်ချိန်တွင်မင်းက Libra ဟုထင်သူတစ် ဦး ဦး နှင့်တွေ့ဆုံဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့သည်သင်၏တက်နေသည့်နိမိတ်အတွက်မှားယွင်းခဲ့ကြပေမည်။ သင်၏မြင့်မားသောနိမိတ်လက္ခဏာသည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်လေ့ရှိသည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုသင့်အားမြင်တွေ့ရသည့်ပုံရိပ်နှင့်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါလူတိုင်းတွင်သင်စွဲမှတ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ရှာကြစို့ ...
မြဲမြဲကိုင်ထားသည်! subscribe လုပ်ဖို့မေ့သွားရင်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူခေတ်မီအောင်လုပ်ဖို့သတိပေးခေါင်းလောင်းကိုမြည်လာပါ။ အိုး, Beast ကိုထောကျပံ့ဖို့အဆုံးတိုင်အောင်ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုပါ။ သင်၏မြင့်သောနိမိတ်လက္ခဏာ၏သင်၏စရိုက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တက်ကြွသောနိမိတ်လက္ခဏာကို ဦး စွာစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
မြင့်တက်သောနိမိတ်လက္ခဏာသည်သင်မွေးဖွားချိန်တွင်အရှေ့ဘက်မှပေါ်ထွက်လာသောရာသီခွင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Ascendant ဟုလည်းလူသိများပြီးလသို့မဟုတ်နေသည်လည်းသင်၏ horoscope ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ascendant တွင်ပါဝင်သည်။ သူတို့၏အပေါ်သင်တို့၏ထင်မြင်ချက်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထင်မြင်ချက်များကိုပြောခြင်းအားဖြင့်စာရင်းတစ်ခုကိုနံပါတ်တစ်ဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
Aries Ascendant ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက် - Dynamic Pioneering, Positive နှင့်မွေးဖွားသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး တို့ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည်သင့်ကို ဦး ဆုံးတွေ့သောအခါလူတစ် ဦး ၏ခေါင်းကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သင်ဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ Scorpio တစ်ယောက်၊ Virgo တစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ်ရှက်ဖွယ် Pisces တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင်ဟာ Aries ဆိုရင်မင်းရဲ့တက်နေတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကရဲရင့်တဲ့ Aries နဲ့တူလိမ့်မယ်။ အချို့လူများကသင့်အားအနည်းငယ်သောအားဖြင့်အနည်းငယ်သောအားဖြင့်သင်အားတွန်းလှန်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်ကိုသူတို့ပိုမိုသိလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
သင်၏နေနှင့်လသည်သင်၏ ascendant ၏နိမိတ်လက္ခဏာတွင်ပါရှိသလားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ ထို့နောက်သင်သည်အခြားသူများအားသင်ပေါ်လာသည့်လူစားမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ Taurus Ascendant ပထမဆုံးထင်မြင်ချက် - အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မင်းရဲ့ Ascendant ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနတ်ဘုရားမကိုမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အသွင်အပြင်ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်။ လူတွေကသင့်ကိုပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါသင့်ကိုလှပပြီးဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်။
အချို့ကသင့်ကိုအထုပ်တစ်ခုလုံးအဖြစ်ပင်မြင်နိုင်သည်။ N ကောင်းပြီ၊ သင်ကတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် Taurus ascendant ဖြစ်မယ်။ ဒါကလုံးဝမမှန်ပါဘူး
အခြားတက်နေသည့်ရာသီဥတုနိမိတ်ကဲ့သို့ပင်၎င်းတွင်လည်း၎င်း၏ပြproblemsနာများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအတက်ကိုအောက်တွင်မွေးဖွားသူများကိုသူတို့၏အတက်အဆင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အနည်းငယ်ခေါင်းမာသောသူများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ အလားတူပင်လူတို့သည်လည်းသူတို့နည်းနည်းမာနထောင်လွှားကိုရှာဖွေပေလိမ့်မည်။
အမွှာ Ascendant ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက် - ခရီးသွားသည့်အခါဤတက်ကြွမှုရှိသည့်အန္တရာယ်ရှိသောသူများသည်သင်သွားသည့်အခါဥာဏ်ပညာမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် Ascendant ကိုအုပ်ချုပ်သောမာကျူရီ၏လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ သင်ဟာအာလူးတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်စားကောင်းသောက်ဖွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ၊ ၎င်းသည် Gemini Ascendant ၏အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အိုး၊ မင်းဟာအရမ်းရယ်ရတယ်၊
Cancer Ascendant Impression: သနားကြင်နာတတ်တဲ့သူဟာကြင်နာတတ်ပြီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူနဲ့တူသလား။ ဒါကမင်းရဲ့ကင်ဆာလက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ Cancer Ascendant သည်ကင်ဆာလနှင့်နေလက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူသည်။ ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေခြင်းသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝကိုမကြာခဏဆုံးဖြတ်သည်။
သင်ဟာအလွန်လက်တွေ့ကျသော Capricorn တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသင့်တွင်ထိုတက်ကြွမှုရှိသူသည်သင့်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းရှိသည်။ လူတွေကမင်းဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ်လို့ခံစားမိနိုင်တယ်။ Leo Ascendant Impression: CharismaticLeos သည်သဘာ ၀ အရဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ သင်၏နိူင်ငံရေးအရဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်ကိုနှစ်သက်သည်။
သင်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်သောအခါသင်၏ ဦး ခေါင်းကိုလှည့်ပါကသင်၏အသံကိုကြားရလိမ့်မည်။ သင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်သူများလည်းသဘောမတူနိုင်ဘဲသင်၏အကြံဥာဏ်ကိုလည်းရယူလိမ့်မည်။ ဒီအရာအားလုံးဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ လီယိုမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအလွန်အံ့သြဖွယ်ရာအဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ Virgo AscendantImpression: PoisedA ဟာ Virgo Ascendant တစ်ယောက်အနေနဲ့၊ ခင်ဗျားဟာအလွန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်သူ၊
ပြublနာဖြေရှင်းခြင်းသည်သင်တို့အတွက်ပြisn'tနာမဟုတ်ပါ၊ အခြေအနေများခက်ခဲလာသောအခါအခြေအနေများကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းသင်သိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအလုပ်ပြီးမြောက်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သင်သည်အရာရာကိုအလွန်အမင်းဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းဝေဖန်ခြင်းခံရသည်ဟုရှုမြင်သည့်အချိန်များများရှိသည်။
ဤအမြင်သည်များသောအားဖြင့်လူများအားသင့်အားဝေးကွာစေပြီးသင်၏အနားတွင်သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်သာကျန်ရှိစေသည်။ မာကျူရီမှအုပ်ချုပ်သော Gemini Ascend များနှင့်မတူဘဲ Virgo Ascendants များသည်ခန့်မှန်းရခက်။ အလွန်ကောင်းသည်ဟုမကြာခဏမြင်ကြသည်။ Libra AscendantImpression: Charming မင်းဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ချီးမွမ်းဖူးပါသလား။ အကယ်၍ သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့လျှင်သင်၏မင်းသားသည် Libra ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤဗီးနပ်စ်အုပ်ချုပ်သောနိမိတ်သည် Taurus ကဲ့သို့အမြဲတမ်းမကြည့်နိုင်ပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ခြင်းဖြင့်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းမှုတွင်ထူးချွန်သူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကပရမ်းပတာအမျိုးမျိုးနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေချင်ကြတယ်။
တချို့ကသင်၌အနည်းငယ်လွန်းလွန်းသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ်မဖော်ပြလိုတာကိုသူတို့မြင်ပြီးသူတို့ကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ Scorpio AscendantImpression: Sexy အကယ်၍ ငါတို့ရဲ့ Zodiac ဆောင်းပါးများကိုအရင်ကမြင်ဖူးခဲ့လျှင်၊ Scorpio ဟာအသုံးများဆုံးလိင်၊ သေခြင်းနှင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းတို့သည်ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်မအံ့သြသင့်ပါ။
အကယ်၍ ထိုရာသီခွင်အမှတ်အသားသည်သင်၏အတက်အဆင်းဖြစ်ပါကသင်ရေတွက်နိုင်သည်ထက်များသောအထင်ကြီးလေးစားသူရှိနိုင်သည်။ ဒီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ၏တက်ကြွခြင်းကိုမကြာခဏအလွန်သိမ်မွေ့ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောပုံစံဖြင့်အစွမ်းထက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ လူများသည်သင့်အားစကားလုံးများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်အပြင်သူတစ်ပါးကိုဆန္ဒအလျောက်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသူအဖြစ်မြင်လေ့ရှိသည်။
သူတို့သည်သင့်အားပိုမိုသိကျွမ်းလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ကသူတို့ထင်ထားတာထက်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မည်။ သင်မလိုချင်သည့်အချိန်၌ပင်အာရုံစိုက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်မသိလျှင်ပင်လူတွေကသင့်ကိုတွန်းလှန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
Sagittarius Ascendant Impression: Free Spirit သင်ဟာစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့၊ နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အဝေးဆုံးသွားဖို့၊ အချိန်ရှိရင်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုသွားချင်နေသူဖြစ်လိမ့်မယ်။ Sagittarius မှဆင်းသက်လာသော Jupiter သည်သူတို့၏ပထမဆုံးအိမ်တွင်ရှိပြီး၊ များသောအားဖြင့်လူတို့သည်မင်းကိုလွတ်လပ်သောစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်မြင်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်အလွန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊
သင်၏အားလပ်ချိန်များတွင်ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်းအခြားသူများကသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ခံယူကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်သင်၏ပုံသည်အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်၊ တင့်တန်၊ လာရာခရက်ဖ်၊ Capricorn AscendantImpression: စိတ်ပိုင်းဖြတ် Capricorn များသည်စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထား၍ ရိုးသားပြီးရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောလူများဖြစ်သည်။
တက် Capricorn အလေးအနက်နှင့်အာရုံစူးစိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော၊ ပညာရှင်ဆန်ပြီးပညာရေးဆိုင်ရာကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်သူတို့၏နေ့စဉ်လူမှုဘ ၀ တွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဟာသလုပ်ရင်လူတွေကအဲဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူး၊ သူတို့ကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတတ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ကနည်းနည်းလောက်နေရာယူထားနိုင်တယ်။
Aquarius AscendantImpression: Eclectic အကယ်၍ မင်းကပုန်ကန်သော Aquarius ကိုတက်ကြွသူတစ် ဦး အနေနှင့်ရှိလျှင်၊ သင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်၏တီးမှုတ်ခြင်းခံရသည်ဟုထင်နေစဉ်လူများသည်သင်၏ဉာဏ်ရည်နှင့်ဉာဏ်ရည်ကိုပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ သင်၏အတွေးအခေါ်များသည်စစ်မှန်။ သင်ကိုယ်တိုင်မွေ့လျော်သောနည်းဖြင့်တင်ပြလိုသည်။ မင်းကကြင်နာပြီးကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ဒီအရည်အသွေးတွေကမင်းရဲ့လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှာသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
အိုးနှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများစွာ၏အဆိုအရနီကာလာတက်စလာ၏ Ascendant ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မကောင်းဘူးလား Pisces AscendantImpression: Neptune ကအုပ်ချုပ်ပြီးထူးခြားတဲ့ဒီနိမိတ်လက္ခဏာကိုရာသီဥတုသက်တမ်းအရင့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒီတက်ကြွ၏ဇာတိဟောင်းစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
Pisces Ascendants များသည်များသောအားဖြင့်အလွန်စိတ်ခံစားမှုများသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတွေးအခေါ်အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့၏အမြင်သည်အယူဝါဒနှင့်လက်တွေ့မကျပါ။ ဒါကြောင့်ဒီတက်ကြွတက်ကြွနေတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာမကြာခဏပျောက်ကွယ်သွားရတယ်။
ထို့အပြင်သူမကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်အမြဲတမ်းလျှို့ဝှက်နက်နဲရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးယုတ္တိဗေဒကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Aries ကိုငါ၏တက်နေသောနိမိတ်တွင်ထားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မဟုတ်သော်ငြားလည်းပြောင်းလဲခြင်းဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ ဝိုး! စာအုပ်တစ်အုပ်ကို၎င်းရဲ့အဖုံးကနေဘယ်တော့မှမစီရင်သင့်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါဆိုမင်းရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲ။ သင်ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများအရေးပါထင်ပါသလား အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင့်ထံမှကြားနာလိုပါသည်။
Lifesolver မှကြိုဆိုပါ၏။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Taurus Man ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုနေသလဲ။ ဤကဲ့သို့သောအပတ်စဉ်ဆောင်းပါးများကိုယနေ့ရယူရန်မမေ့ပါနှင့်! Taurus အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးတွင်အတော်အတန်စဉ်းစားတတ်ကြသောကြောင့်သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများတွင်အောင်မြင်မှုရှိကြသည်။ သို့သော်ဤအပြုသဘောဆောင်သောစရိုက်များအားလုံးနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောလက္ခဏာအချို့သည် Taurus လူနှင့်ပေါင်းသင်းရန်ခက်ခဲစေသည်။ အထူး Taurus လူရှိပါသလား မင်းဘ ၀ မှာမင်းရဲ့မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့လား။ အရာဝတ္ထုတွေကိုမမြန်ခင်သူ့အကြောင်းသိတာကပိုကောင်းတယ်။
လူတစ် ဦး ၏ကောင်းကျိုးနှင့်မကောင်းသောအရည်အချင်းများကိုကြိုတင်သိရှိထားခြင်းကသင့်အားသီးခြားခွဲထားသည့် Ta Urus ယောက်ျား၏အပြုသဘောဆောင်သောအရည်အသွေးများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီနိုင်သည်။ Taurus ယောက်ျား, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့, ချစ်ခြင်းမေတ္တာများနှင့်သူတို့သူတို့ချစ်ရသူမှန်ကန်စွာပြုမူဆက်ဆံပုံကိုသိကြသည်။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းဘဝမှာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေပြည့်မီဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေပါ။ ဒီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ၏ယောက်ျားအတော်လေးရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထိုက်ထက်လျော့နည်းဘာမှများအတွက်အခြေချဘယ်တော့မှမ။
ထိုအရာများက၎င်းတို့ကိုသူတို့၏ဘဝတွင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီးအောင်မြင်စေသည့်အခြားအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများမှာ - * Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည်ခေါင်းမာသည်။ ၎င်းသည်အခြားရာသီဥတုလက္ခဏာများရှိလူများအတွက်အားနည်းခြင်းဖြစ်သော်လည်း Taurus-Man သည်၎င်းကိုသူတို့၏အစွမ်းသတ္တိအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သူ၏အနေအထားကိုတူးဆွ။ ကိုင်ထားနိုင်ခြင်းသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်သူကိုအောင်မြင်မှုရစေသည်။ * Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည်စူပါသစ္စာ ရှိ၍ ရက်ရောသည်။ ရက်ရောမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုအတွက် Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာသည် Taurus ယောက်ျားများကိုမနိုင်ချေ။
သင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိပါကသင့်တွင်ထူထဲ။ ပိန်ပိန်နေသောသင့်အတွက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သင်၌ရှိသည်။ သူမရဲ့နှလုံးသားတွေကသူမကိုဘယ်သူ့ကိုမှသစ္စာဖောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Taurus လူတစ် ဦး သည်သူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်မဆိုကောင်းသောပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။
သူချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်ကိုသူသိသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုတန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်များဖြင့်ရေချိုးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအထူးခံစားစေသည်။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့၏အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်များတွင်ငွေရေးကြေးရေးအရကူညီပေးသည်။ Taurus လူ၏ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။ သည်အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာများကဲ့သို့ Taurus လူ၌လည်းကောင်းသည့်လက္ခဏာများအပြင်အနုတ်လက္ခဏာစရိုက်များရှိသည်။
ဤအရာသည် Taurus အမျိုးသားများအတွက်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏အဖုံးများနှင့်ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။ Taurus လူတစ်ယောက်အတွက်တော့အသွင်အပြင်ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးဆုံးပဲ။ သူသည်လူတို့ကိုသူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့်အဝတ်အစားအားဖြင့်မကြာခဏစီရင်တတ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အပြင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏ရှုထောင့်များစွာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ ဒီအနုတ်လက္ခဏာအရည်အသွေးက Taurus လူသား၏ဘဝအသက်တာ၌ပြinနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Taurus လူတစ်ယောက်သည်ရုပ်ဝါဒဆန်သည်။ Taurus လူအတွက်ငွေကြေးနှင့်အောင်မြင်မှုသည်သူ့ဘဝတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
သူကသာမန်ဘဝကိုဇိမ်ခံကားမစီးဘဲနေလို့မရဘူး။ Taurus လူ၏ဘ ၀ သည်ဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်း၊ စျေးကြီးသည့်ဟိုတယ်များတွင်ညစာစားပွဲများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ Taurus Man: Friendships Taurus ယောက်ျားကသူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ သစ္စာရှိပြီးသူတို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပဲ။
သူတို့ကသူတို့၏သူငယ်ချင်းများမည်မျှရှိသည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်သော်လည်းသူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များကိုသတိရခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြကြသည်။ သူငယ်ချင်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Taurus လူတစ်ယောက်သည်သူနှင့်အတူတူပင်ကြွယ်ဝသောလူနေမှုပုံစံကိုအတူတူနေထိုင်သူများကိုအမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်သည်။ သူကလူသစ်တွေကိုယုံကြည်ဖို့အချိန်အများကြီးယူတယ်၊ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းသေးသေးလေးတွေရှိတယ်။
Taurus လူတစ်ယောက်ကသူတို့သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့စိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားသောအခါသူ့သူငယ်ချင်းများကိုခေါ်နိုင်သည်။ Taurus လူတစ်ယောက်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရခြင်း၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသင်သူ့ကိုအများဆုံးလိုအပ်ချိန်တွင်သူသည်သင့်အတွက်အမြဲရှိနေသည်။ သင့်တွင်ကျောက်ကဲ့သို့ရပ်။ သင့်အားအဆုံးတိုင်အောင်ခုခံကာကွယ်မည့်သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိသည်။
Taurus Man: Relationships Taurus ယောက်ျားသည်မိန်းမတိုင်းတွင်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများရှိသောကြောင့်သူသည်စုံလင်သောဘဝပါတနာသို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ သူချစ်သောသူအားဆက်ဆံရေးတွင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အမြဲဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။ သူသည်သူမ၏နှလုံးနှင့်ခံစားချက်များကိုကာကွယ်ရန်သူတတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် Taurus လူသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခေါင်းမာတတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ့ကိုသူနှင့်အဆက်အသွယ်တူညီရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသင်သူ့ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှစိတ်မပျက်စေရ။
သူဟာအပြင်ထွက်ရတာကိုကြိုက်ပေမယ့်အိမ်မှာတည်းခိုတာနဲ့သူမနဲ့အတူအိပ်ရာပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူသည်သူမလိုအပ်သောအရာမှန်သမျှကိုသူ၏ဘ ၀ တွဲဖက်ကိုပေးဆပ်ရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်းခြွင်းချက်မရှိသောမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိမည် Taurus လူတစ်ယောက်ကသူကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူ့ဘဝအဖော်ကသူ့ကိုမပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စံပြဖြစ်အောင်ပုံသွင်းဖို့မမျှော်လင့်ဘူး။
ဒါဟာ Taurus လူကိုနက်ရှိုင်းစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ Taurus Man: အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Taurus အမျိုးသားသည်ကင်ဆာမိန်းမနှင့်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်သည်။ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်အနေဖြင့်လိုအပ်သောinityတ္တပ္ပစိတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုသူပေးနိုင်သည်။
Taurus ယောက်ျားအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး မှာအပျိုကညာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမဘဝတွင်ငွေရေးကြေးရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုတို့ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ Capricorn အမျိုးသမီးများသည် Taurus အမျိုးသားအတွက်အခြားစုံလင်သောပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
Capricorn အမျိုးသမီးသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်တတ်သောသဘောသဘာဝသည် Taurus ယောက်ျားနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး သည် Pisces အမျိုးသမီးနှင့်အလွန်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာသူသည်ပညာရှိသောသူ၊ Pisces အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းသည်သူမရှာဖွေနေသောပညာ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်အပြစ်ကင်းစင်မှုအဆင့်အတန်းရှိသောကြောင့် Taurus အမျိုးသားတစ် ဦး အားလတ်ဆတ်သောလေနှင့်တူလိမ့်မည်။
Taurus လူကိုသင်နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်လိုသိရသလဲ Taurus လူတစ်ယောက်ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့်သူကသဲလွန်စတွေကိုသူဆက်ထားမယ်။ သို့သော်၊ ဤမှတ်စုများသည်ဖတ်ရန်ခက်ခဲပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ Taurus လူတစ်ယောက်သည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးမည်ဟူသောလက္ခဏာအချို့မှာ - သူသည်သင့်အားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှက်ကြောက်နေလိမ့်မည်။ သူနှင့်သင်၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်သူကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူကသူရဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အရသူဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘက်ကိုပြလိမ့်မယ်။ Taurus လူဟာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရာသီဥတုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Taurus လူတစ်ယောက်သင့်အနားမှာရှိခြင်းသည်သင့်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်၊ သူသည်သူသည်စူပါအထောက်အကူပြု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်သည်။ လူအချို့က Taurus အမျိုးသားများသည်စောင့်ရှောက်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏အပြုအမူ၊ သင်ပြုမူပုံနှင့်သင်မည်မျှတသမတ်တည်းရှိမှုအပေါ်မူတည်သည်မှာမမှန်ပါ။ Taurus လူတစ်ယောက်သည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါကထိုပင်ကိုစရိုက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါ။
Taurus ယောက်ျားစူပါသစ္စာစောင့်သိကြသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့နိုးနှင့်သင်စွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတွေကိုတော်တော်လေးအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချစ်စရာကောင်းသောအိမ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးသာယာဝပြောသည့်ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် Taurus လူနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မေလ ၉ ကနယ်ခြားမလား?
မေ ၉zodiac လူမျိုးများသည် Aries-Taurus တွင်ရှိသည်နယ်ခြား။ ဒါကနယ်ခြားစွမ်းအား အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်များသည်ဤစည်သွပ်သူများ၏ဘဝကိုအုပ်ချုပ်သည်။ နှစ်ခုကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်ဖြည့်စွတ်ဖြစ်ကြသည်။
မေလ ၂၂ က Taurus လား။
မေ ၂၂ရာသီဥတုကလူအပေါ်ဖြစ်ကြသည်က-Gemini နယ်ခြားမုခ်။ ဤသည်စွမ်းအင်၏နယ်နိမိတ်ဖြစ်၏။ ဒီဂြိုလ်နှစ်ခုကို Venus နဲ့ Mercury တို့ကအုပ်စိုးတယ်။ Venus ဂြိုဟ်မှသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သင်လိုအပ်သောအရည်အသွေးများကိုသင်ရရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Taurus ကိုအကောင်းဆုံးချစ်သူများဖြစ်ကြသည်?
ကလုပ်ပါအကောင်းဆုံးချစ်သူများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ baes တွေကိုပျော်ချင်တာ။ အခြားအရာများထက်သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုသူတို့တန်ဖိုးထားကြသည်။ ဆိုလိုတာကကမကြာခဏသူတို့ရဲ့သေချာစေရန်အပိုမိုင်တတ်၏ချစ်သူသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး pampered နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာဂရုစိုက်သည်။4 2017 ။
က: Libra နှင့်ကနှစ် ဦး စလုံးအနုပညာ, ဂီတနှင့်ဗေဒ၏ Venusplanet ကအုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဒီနှစ်ခုဟာ BFFs ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရသာကြောင့်ဖြစ်သည်။၁၂ ။ 2021 ။
ကင်ဆာ၊ Scorpio နှင့် Pisces တို့ဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးနေဆိုင်းပွဲများဘို့က။ တစ်ခုချင်းစီကိုမြေသားဖြစ်သောရေသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်က'' ဖြည့်စွတ်ဒြပ်စင်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လွယ်ကူစွာသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အခြားတစ်ခုအားအခြားအားနည်းချက်တစ်ခုခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
မေလ ၉ ရက်အတွက်ရာသီခွင်အမှတ်အသားကဘာတွေလဲ။
မေလ ၉ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောသူများ - ရာသီခွင်အမှတ်အသားသည် Taurus ။ မေ ၉ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းကမွေးဖွားသော horoscope ကသင်သည်ရှက်တတ်သူမဟုတ်ဟုခန့်မှန်းသည်။ အမှန်တရားမှာရဲရင့်ခြင်း၊ ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာအင်အားကြီးသူတွေလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ နွားသည်အတိုက်အခံကိုမကြောက်ပါ။
မေလ ၉ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလူတချို့ကဘယ်သူတွေလဲ။
ယနေ့မွေးဖွားသည့်ကျော်ကြားသူများ - Candice Bergen၊ Billy Joel၊ John Corbett, Grace Gummer, Chris Zylka, Rosario Dawson, Noah Centineo, Chris Diamantopoulos ။ သင်၏မွေးနေ့သည်ယခုနှစ်လပြည့်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သင်ကြားရေးကာလကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
မေလ ၉ ရက်အတွက်ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်တွေကဘာလဲ။
မေလ ၉ ရက်မွေးနေ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်များ။ သောကြာနေ့ - ဤသည်မှာ Venus ဂြိုဟ်၏နေ့ ဖြစ်၍ သင်မိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်နှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ အင်္ဂါနေ့ - အင်္ဂါဂြိုဟ်၏နေ့သည်ဥာဏ်ပညာ၊ ကံကောင်းခြင်း၊ ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်သာယာဝပြောခြင်းတို့၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။